समाचार-शेन्ज़ेन SH-MBR टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
MBR प्रक्रिया about को बारे मा केहि गलतफहमीहरु
झिल्ली बायोरेक्टोर (MBR) एक झिल्ली प्रक्रियाको संयोजन हो जैसे कि माइक्रोफिल्ट्रेसन वा अल्ट्राफिल्टरेसन सक्रिय स्लज प्रक्रियासँग, जसले परिणामस्वरूप बर्बाद पानीमा महत्वपूर्ण कार्बनिक घटक प्राप्त गर्दछ। झिल्ली प्रणालीले सफा र उच्च गुणस्तरको पानीमा ढल निकाल्दछ। उपचार टेक्नोलोजीको सानो पदचिह्न प्रणालीलाई प्राकृतिक, रमणीय वातावरणमा एकीकृत गर्न र सिँचाइ प्रयोगको लागि फोहोर पानीको उपचार गर्न सक्षम गर्दछ। MBR प्रक्रियामा हिलो उत्पादन धेरै कम छ। एमबीआरमा बहावको गुणस्तर परम्परागत एएसपी प्रवाह भन्दा उत्कृष्ट छ। एमबीआरबाटको प्रवाह औद्योगिक अनुप्रयोगहरूको लागि आरओ (रिभर्स ओस्मोसिस) उपचार पछि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। एमबीआरहरूले पारम्परिक एएसपी (एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस) को तुलनामा धेरै उच्च एमएलएसएस (मिक्सर लिकर सस्पेंडेड सॉलिड) मा अपरेट गर्न सक्दछ।
एकीकृत ढल निकास उपचार उपकरणको मूल्य कति छ?
एकीकृत ढल निकास उपचार उपकरणको मूल्य कति छ? मलाई विश्वास छ कि धेरै खरीददारहरूले यो प्रश्न सोध्नेछन् र यो प्रश्नको बारेमा धेरै चिन्तित छन्। वास्तविक स्थितिमा एक नजर राखौं! एकीकृत ढल निकास उपचार उपकरण
जुलाई १ER, २०२० मा वाटरटेक चीन (गुआंग्डोंग) २०२० हेर्नुहोस्